अब १२ अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको 'प्लाज्मा थेरापी'बाट उपचार :: Setopati
अब १२ अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको 'प्लाज्मा थेरापी'बाट उपचार २५ जनाले दिने भए प्लाज्मा
विवेक राई काठमाडौं,साउन १९
सरकारले १२ वटा अस्पताललाई कोरोना संक्रमणको गम्भीर बिरामीमा 'प्लाज्मा थेरापी' विधिबाट उपचार गर्न अनुमति दिएको छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप कुमार ज्ञवालीले चार वटा निजीसहित १२ वटा अस्पताललाई उक्त विधिबाट संक्रमितको उपचार गर्न स्वीकृति दिएको बताएका छन्।
अनुमति पाउने निजी अस्पतालहरूमा मेडिसिटी, ग्रान्डी, ह्याम्स र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज छन्।
यस्तै, सरकारी अस्पतालहरूमा धुलिखेल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, टिचिङ, पाटन, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोसी, नारायणी, भक्तपुर, भेरी र सेती अस्पताल छन्।
अब यी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमणको गम्भीर बिरामीलाई प्लाज्मा दिएर उपचार गर्न सक्छन्। तर त्यसको लागि दाता र संक्रमित बिरामी दुबैको स्वीकृति हुनुपर्ने डा. ज्ञवालीले बताए।
उनले हालसम्म २५ जना व्यक्तिहरूले प्लाज्मा दान गर्न इच्छाएको जनाए।
यसरी प्लाज्मा दान गर्ने व्यक्तिको लागि परिषद्ले एउटा मापदण्ड तोकेको छ।
पहिलो कुरा भनेको प्लाज्मा दान गर्ने व्यक्तिले रक्तदान गर्नुपूर्व कम्तिमा १४ दिन अगाडि उनमा संक्रमणको कुनै लक्षण देखिनु हुँदैन। साथै दाताको संक्रमण पुष्टि आरटी पिसिआर विधिबाटै भएको हुनुपर्छ।
यस्तै दाता र प्लाज्मा लिने व्यक्तिको रगत समूह पनि मिलेको हुनुपर्छ।
परिषद्ले प्लाज्मा लिने बिरामीको लागि पनि मापदण्ड तोकेको छ।
पहिलो कुरा प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्न लागिएको बिरामी १८ वर्ष माथिको हुनुपर्छ।
साथै संक्रमित अस्पताल भर्ना भई उपचार भएको र निजको अवस्था पनि गम्भीर हुनुपर्छ।
'बिरामीको अवस्था गम्भीर भएको हुनुपर्छ वा चिकित्सकले बिरामीको अवस्था गम्भीर हुनसक्ने भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ,' डा. ज्ञवालीले भने।
अर्को कुरा संक्रमित बिरामीले आफूलाई उक्त विधिबाट उपचार गर्न भनेमात्र अस्पतालहरूले निजको उपचारमा यो विधि प्रयोग गर्न पाउँछन्।
यो विधिबाट अस्पतालहरूले संक्रमितको अस्पताल बसाइको अवधि, स्वास्थ्य पर्ने प्रतिकूल असर वा सुधार हुने कुरालाई अध्ययन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा सुरूआतदेखि नै परिषद्ले पनि अनुसन्धान र अध्ययन गरिरहेको डा. ज्ञवालीले बताए।
सरकारबाट अनुमति पाएका अस्पतालहरूले प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न तयारी थालेका छन्।
त्यसमध्ये स्वीकृति पाएको टेकु अस्पतालले पनि उक्त विधिबाट उपचार गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले सेतोपाटीसँग भने, 'अहिले त अस्पतालमा प्लाज्मा दिनुपर्ने गम्भीर बिरामी छैनन् तर त्यस्तो बिरामी भयो भने यो विधिबाट उपचार गर्छौं।'
उनले प्लाज्मा दिने पहिलो व्यक्ति पनि टेकु अस्पतालबाटै निको भएर गएको बताए। कोरोना संक्रमणको गम्भीर बिरामीमा प्लाज्मा थेरापी प्रभावकारी मानिएको छ। कोरोना संक्रमणसँग लडिरहेका कतिपय देशले यसको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। कोरोना संक्रमण भएपछि निश्चित समयवधिमा मानिसको शरीरमा एन्टिबडी उत्पादन हुन सुरू गर्छ।
जुन एन्डिबडीको काम भनेको भाइरससँग लड्नु हो र फेरि भाइरसबाट हुनसक्ने आक्रमणलाई प्रतिरक्षा गर्नु हो।
यसरी उत्पादन भएको एन्टिबडीबाटै बनेको प्लाज्मा कोरोना संक्रमणको गम्भीर बिरामीको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ।
नेपालमा पहिलोपटक यो विधिबाट उपचार टिचिङ अस्पतालमा भएको छ। विराटनगरका ६० वर्षीय संक्रमित पुरूषमा प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिएको हो। र उपचारपछि बिरामीमा उल्लेख्य सुधार आएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका कोभिड-१९ व्यवस्थापन टिमका संयोजक डा. सन्तकुमार दास भन्छन्, 'गत बिहीबार उहाँलाई प्लाज्मा दियौं। पछि उहाँको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार देखियो।'
गत साउन १० गते संक्रमित पुरूष अस्पताल भर्ना हुँदा उनमा निमोनियाको समस्या थियो।
त्यसपछि उनलाई आइसियूमा राखेर उपचार गरियो। पछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने स्थिति पनि आएको थियो। तर बिहीबार उनलाई प्लाज्मा दिएपछि स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको डा. दासले बताए।
'अहिले उहाँको निमोनिया पनि ७० प्रतिशत सुधार भएको छ। पहिले ६० प्रतिशत अक्सिजन चाहिएकोमा अहिले २८ प्रतिशतमात्र चाहिएको छ' उनले भने, 'अब त भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। साथै दोस्रो पटक प्लाज्मा दिनुपर्ने स्थिति पनि देखिँदैन।'
सरकारले प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार प्रभावकारी देखिएपछि अन्य अस्पतालहरूलाई पनि स्वीकृति दिएको हो।
सुरुवाती १२ वटा अस्पताललाई अनुमति प्रदान गरिएकोमा थप जनशक्ति र पूर्वाधार हेरेर अन्य अस्पतालहरूलाई पनि अनुमति दिने स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ।
परिषद्का अनुसन्धानकर्ता मेघनाथ धिमालले भने, 'सुरूमा १२ वटा अस्पतालहरूलाई अनुमति दिएका छौं। उहाँहरूसँग जनशक्ति, पूर्वाधार लगायत सबै मापदण्ड पुग्छ। अब अरू अस्पतालहरू पनि मापदण्ड पुर्याएर आउनुहुन्छ भने अनुमति दिन्छौं।'